ABOUT US - Coins uye Pin Co., Ltd.
Akamumutsira muna 2004, Tave vachipedzera pachayo kupa zvakawanda zvipo vatengi ayo. ari nyanzvi lapel nembambo, simbi mari, Keychains, bhanhire simbi dzemabhande emabhurukwa, cufflinks fekitari kwemakore anopfuura 15, basa redu iri kupa chinokosha zvigadzirwa kuti vatengi vedu, kwete chete mutengo asiwo unhu.
We funga unhu sezvo panzvimbo yokutanga, zvigadzirwa zvose vari vakaita danho nedanho mukati yedu yakaoma unhu kuzvidzora.
Vatengi vose 'zvirevo havasi chete unhu nechokwadi asiwo ngozi chaizvo.
Unhu kuzvidzora yedu dhipatimendi ndiye simba redu, vari akakwanisa atarisire danho ose ari yose muitiro nechokwadi unhu uyewo uwandu.
Aine chido pane zvatiri kuita, tsvimbo yedu anoda kupa zvakanakisisa vatengi kwamuri! Tinewo rokutengesa vanhu kushanda pazuva kana usiku kuti vatengi nechokwadi akasiyana nzvimbo aigona kuwana kukurumidza kuita kana mashoko inodiwa.
Contact isu zvino slag!